We.com.mm - နုပျိုမှုကို ဖျက်ဆီးဖြစ်စေတဲ့ နေ့စဉ်အပြုအမူ (၆) မျိုး
အသက် (၃၀) မပြည့်သေးခင်ကတည်းက မျက်နှာပေါ်မှာ အရေးအကြောင်းတွေ တွေ့နေရပြီဆိုရင်တော့ သိပ်မဟုတ်သေးပါဘူးနော်။ မှန်ထဲကိုကြည့်လိုက်ပါ။ မိမိနဲ့ရွယ်တူတွေထက် ကိုယ့်ရုပ်ရည်က ပိုပြီးရင့်နေသလား? သူများတွေကလည်း ကိုယ့်ကို လက်ရှိအသက်ထက်ပိုပြီး ကြီးတယ်လို့ ထင်နေကြလား? ထင်နေကြတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်မျက်နှာက ရှိသင့်တဲ့နုပျိုမှု မရှိလို့ပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့နုပျိုမှုကို ကိုယ်တိုင်ဖျက်ဆီးနေမိတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့နော်။ အဲ့ဒါကြောင့်သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အိပ်စက်ခြင်းဟာ ကျန်းမာဖို့၊ ပျော်ရွှင်ဖို့၊ အလုပ်တွေများများလုပ်နိုင်ဖို့အတွက် အဓိကကျဆုံး အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝဘူး၊ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်မပျော်ဘူးဆိုရင်လည်း လူက ရှိရင်းစွဲထက် ပိုအိုစာလာပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အိပ်ရေးပျက်မခံပဲ ပုံမှန်၊အချန်မှန်မှန်လေးအိပ်စက်အနားယူဖို့အကြံပေးပါရစေ။
အစားအသောက်ကို မှန်ကန်စွာ မရွေးချယ်တတ်ခြင်းကလည်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲနော်။ လုံလုံလောက်လောက် စားသုံးရမှာဖြစ်သလို၊ အလွန်အကျွံမစားမိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ အသား၊ငါး၊ အသီးအရွက်နဲ့ ကစီဓာတ်တို့ကို မျှတအောင် စားသုံးပေးသင့်ပါတယ်။ အဆီ၊ အငံ၊ အချိုတို့ကို များများစားရင်လည်း ရုပ်ရင့်စေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်နေ့စဉ်အစားစာတဲ့အခါမှာလည်း မှန်ကန်စွာရွေးချယ်စားသုံးတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်နေကုန် အိပ်နေတာ၊ ထိုင်နေတာကြောင့် ရောဂါပေါင်းစုံ ဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ အဝလွန်တာနဲ့ ဆီးချိုရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်မှု့ကို တိုးလာစေပါတယ်။ ကြွက်သားတွေ အားနည်းလာပြီး အရေပြားတွေကလည်း တင်းရင်းမှု လျော့နည်းသွားပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးမှု နည်းနည်းလောက်ရှိတာက ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ့်ကို တပ်လှန့်သလို ဖြစ်နေတော့ အလုပ်ပိုလုပ်ဖြစ်သွားတယ်လေ။ ဒါပေမဲ့ အချိန်တိုင်း စိတ်ဖိစီးမှုကို ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုရင်တော့ ခေါင်းကိုက်တာ၊ ရင်ဘတ်အောင့်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ပျိုမှ ကိုယ်နုမှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို တတ်နိုင်သမျှ လျော့ထားနော်။
မူးယစ်ဆေး၊ အရက်၊ ဆေးလိပ်တို့ကို စွဲလမ်းနေတာ မကောင်းပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေဆိုတာမျိုးကနေ မကြာခဏ အဆင့်ထိ ရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့ မရရအောင် ဖြတ်ပစ်ပါ။ ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်တာကလည်း နုပျိုမှုကိုဖျက်စီးစေပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဆေးလိပ်သောက်တက်တဲ့သူများလည်း လျှော့သောက်ဖို့အကြံပေးပါရစေ။
လေထုညစ်ညမ်းမှုဟာ အသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ကလီစာတွေအတွက်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ထိုနည်းတူစွာပဲ မသန့်ရှင်းတဲ့ ရေ၊ လေ၊ အစားအသောက်နဲ့ ညစ်ညမ်းတဲ့အရာတွေကို ထိတွေ့နေရခြင်းဟာ လူကိုအိုမင်းရင့်ရော်စေပါတယ်။ လေထုညစ်ညမ်းတဲ့နေရာတွေသွားရတဲ့အခါ အကာအကွယ်တစ်ခုခုယူသွားနော်။ (ဥပမာ။ ။ Face Mask လေးယူသွားတာမျိုးပေါ့)
ခြေထောက်လေးကို Scrub လုပ်ကြမယ်…။
အသားအရေလှချင်တဲ့သူတွေနဲ့ ဝိတ်ကျချင်တဲ့သူတွေ နေ့တိုင်းသောက်ရမယ့် မုန်လာဥနီဖျော်ရည်
??? အလန်းစား သင်္ကြန်မိတ်ကပ် - by MA Htet ??
AALIYAH နဲ့ MAC ရဲ့ Makeup Collection စတင်မိတ်ဆက်
Baby လေးတွေအတွက်သာမက Lady လေးများအတွက်ပါ အသုံးဝင်တဲ့Baby Oil